Soomaali maandoorye soo gelin jirtay Noorweey oo gacanta lugu soo dhigay | Somaliska
Wararka aaanu ka heleyno magaaladda Oslo ee dalka Noorweey ayaa sheegaya in gacanta ay booliska dalkaasi ku soo dhigeen toddobo nin oo soomaali ah kuwaas oo dalkaasi soo gelin jiray maandooriyaha loo yaqaano heriyiin-ka.
Ragg oo caan ka ahaa xaafadda Grønland oo ah xaafadda ay ku badan yihiin soomaalida, ayaa in muddo ah waxaa boolisku ay ku raad joogeen dhaq dhaqaaqooda .
Toddobadan nin ee soomaalida ah ayaa qaarkood waxaa ay heeystaan dhalashada dalalka Deenmaark iyo Hooland. Warbaahinta dalkaasi oo siyaabo kala duwan wax uga qortay kooxdan ka ganacsata maandooriyaha ee soomaalida ah, ayey sheegeen in lugu qabtay 20 kilo oo horiyiinka-ka xilligii la qabanayey. Waana mid ka mid ah maandooriyihii ugu badnaa ee abid ay booliska dalkaasi qabtaan. Dhica kale raggan la qabtay ayaa da’doodu lugu sheegay ineey inta u dhaxeeysa 30 jir ilaa 50 shaqadoodu aheyd iibinta qaadka.
Falka foosha xun ee kooxdan soomaalida ah lugu soo qabtay ayaa soomaalida Noorweey ku reebtay dareen wel wel oo hor leh. Waxaana ay soomaaliddii aan qadka taleefanka kula xirriirnay noo sheegay in ay soomaalida u soo jiidiin sumcad xun iyagoo awalba ay saxaafada dalkaasi ka qori jirtay waxeey doonto.